အပြာလောကထဲ ရပ်တည်နေရတဲ့ အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ အသက် (၂၅) နှစ်အရွယ် အပြာမင်းသမီးလေး | CM
Home Lifestyle အပြာလောကထဲ ရပ်တည်နေရတဲ့ အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ အသက် (၂၅) နှစ်အရွယ် အပြာမင်းသမီးလေး
Renee Gracie က တော့ အရင်တုန်းက ပြိုင်ကားမောင်းသူတစ်ယောက်ပါ။နောက်ပိုင်း ကျ မှ ညစ်ညမ်းဇာတ် ကား ရိုက်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက် အဖြစ် ပြောင်းလဲ ရပ်တည် ခဲ့သူပါ။(၁၉၉၅)မှာ မွေးပြီး အသက်က တော့ (၂၅)နှစ်ပဲရှိပါ သေးတယ်။ professional ပြိုင်ကားမောင်းသူ ဘ၀ က နေ ညစ်ညမ်း မင်းသမီး ဘ၀ကို ပြောင်းလဲ လာခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ဘ၀ တစ်ဆစ်ချိုး မှာ မိသားစု က ရော အားပေးလက်ခံ ခဲ့လား၊ဘယ်လို တုံ့ပြန်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ Renee Gracie က ပြန် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအ ကြောင်းကိုတော့ news.com.au မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Last race of the year this weekend! Where has the year gone! Who’s coming to the Gold Coast!?
သူမရဲ့ အပြောအရဆိုရင် အရင် အလုပ်နဲ့ လက်ရှိ အလုပ် မှာတော့ လက်ရှိအလုပ်က အရမ်းကို ၀င် ငွေ ရတယ်လို့ ဆို ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ တုန်းက ဆိုရင် Only Fans account အကောင့် က နေ ၀င်ငွေ အ မေရိကန် ဒေါ်လာ ငါးသိန်း ရတယ် လို့ ဆိုပါ တယ်။သူမရဲ့ သီးသန့် ကိုယ်ပိုင် အ ကောင့် ဖွင့်ထားပြီး သူမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် တွေကို ကြည့်ချင် ရင်တော့ အခကြေး ငွေ subscription fee ပေး ရပါတယ်။အဲ့လို နဲ့ ငွေ ရှာ တာပါ။
Gracie က တော့ (၂၀၁၅)တုန်းက ဆွစ်ပြိုင်ကားမောင်း သမား Simona de Silvestro နဲ့ Bathurst မြို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။သူမရဲ့ career life အ ပြောင်းအလဲ အ ကြောင်းကို တော့ ဒီနှစ်အ စောပိုင်းကမှ The Daily Telegraph မှာ ပထမ ဆုံး ဖော်ပြ ခဲ့တာပါ။လက်ရှိ အလုပ်က မယုံနိုင် လောက် အောင် အရမ်း ၀င်ငွေ ကောင်းပေမယ့် မ ကောင်းတဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ကြောင့် အဲ့ဒီတုန်းက အ ဖေ ဖြစ်သူနဲ့ စကား မပြော ပဲ နေ ခဲ့တယ်လုိ့ Gracie က ဆိုပါတယ်။
“ကျမ ပိုက်ဆံ တွေ အများကြီး ရလာတဲ့ အချိန်မှာ တော့ အဖေ့ ကို ပြောပြ လိုက်ရတယ်။ကျမ ဒီပိုက်ဆံ အများကြီး ရ နေတာကို အ ဖေက သိ သွားပြီး ဒီပိုက်ဆံ တွေ ဘယ်က ရလဲ လို့ မေးတယ်။ဒါကြောင့် ကျမ အဖေ့ကို အမှန် အတိုင်း ပြော ပြလိုက်တယ်.” လို့ ဆိုပါတယ်။သူမရဲ့ အ ကောင့်ကို ပိတ် လိုက်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ဖူး ပြီး အ ကောင့် ပိတ် ပစ်တော့မယ်လို့ အ ဖေဖြစ်သူကို တိုင်ပင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
“Only Fans အ ကောင့်မှာ ကျ မအတွက် ခက်ခဲ တဲ့ အချိန် တွေ ရှိလာတယ်။တီထွင် ဆန်းသစ်မှုတွေ လုပ် ဖို့ အတွက် ကျမ အရမ်း ကြိုးစား ရတယ်။အ ဖေ့ကို ကျမ ပြော ပြလိုက်တယ်။အ ဖေကျမ ဆက်မလုပ် နိုင် တော့ဘူး ထင်တယ် .လို့ ပြော လိုက်တယ်။ အဲ့မှာ အဖေက မရပ်လိုက်နဲ့။အခုပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရ နေ ပြီ လေ။ မရပ်လိုက် နဲ့.. လို့ အဖေက ပြန်ပြောတယ်..”
ဒီအလုပ် ဆက်လုပ်ဖို့ အ ဖေ ကပဲ သူမကို ဆက်အားပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ “ဒီအလုပ်ကို ကျမ လုပ်နေတဲ့ အတွက် မိသားစု ရော သူငယ်ချင်းတွေ က ဒါကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ဒါက ပိုက်ဆံ ရတယ်၊ပိုက်ဆံ ရလို့ ကျမ လုပ် နေတာ ဆိုတာ သူတို့ သိတယ်။ဒါကြောင့်လည်း သူတို့က ကျမ ကို အားပေးတာပဲ.’ လို့ လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ Body နဲ့ လုပ်စားနေရတဲ့ အလုပ်မို့ ဒီ Body အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။
Kim Kardashian တို့လို ဆယ်လီ တွေ လုပ်တဲ့ Brazilian Butt Lift ဆိုတဲ့ တင်ပါး ပြု ပြင်မှု ကို မကြာ သေးခင်က လုပ်ခဲ့ပြီး $15,000 ကုန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ တစ်လကို ပျှမ်းမျှ ၀င်ငွေ $70,000 လောက် တော့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ တုန်းက ဆိုရင် ဒေါ်လာ (၅)သိန်းလောက် ရတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Previous articleခရီးသွားတွေ အလာများနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဖောက်ထွင်းမြင် အများသုံးအိမ်သာ
Next articleပို့စ်လေးတွေပေးပြီး အပြတ်ဂေါ်နေတဲ့ အိချောပို ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်